Fulkaanaha ugu weyn Iceland oo qarxaya | Saadaasha Shabakadda
Casudi casals | | Saadaasha hawada, Saadaalin
Ma ahan mowduuc xiise leh maanta, haddii ay ahaan lahayd fulkaano kale oo dhowaan qarxi doonta, laakiin xaqiiqadu waxay tahay waxaan ka hadlaynaa Bardarbunga, volcano-ka ugu weyn Iceland. Iyada oo dhererkeedu yahay 2009 mitir oo ka sarreysa heerka badda, waxay yeelatay qaraxyadeedii ugu dambeeyay Agoosto 2014. Calaamadaha dhul gariirka ee dhawaanahan waxay ku dhawaaqayaan in qarax dhow uu dhici karo.
Waxaa si joogta ah ula socda cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga dhulka (geologists) ka dib qaddarka weyn ee dhaqdhaqaaqa dhulgariirka, waxay muujineysaa in cadaadiska gudaha kaldera uu sii kordhayo. Baaxadda Bardbunga kaldera waxay leedahay 70 kiiloomitir oo laba jibbaaran, ballac 10km ah, iyo qoto dheer 700 mitir. Dhererkiisa weyn iyo meesha uu ku yaal awgood, fulkaanaha ayaa ku daboolan baraf iyo bohol ku hoos qarsoon.
Khubarada heeganka ku jirta
Geophysicist Páll Einarsson, oo ka tirsan Jaamacadda Iceland, ayaa faallo ka bixiyey in sababta ay dhulgariirradu uga dhacayaan aaggan ay tahay fulkaanaha oo sii fidaya. Taasi waa, cadaadiska magma ee qolka ayaa sii kordhaya. Tilmaamahan, sida laga soo xigtay Einarsson, waa calaamadda in fulkaanaha uu qarxi doono, muddo gaaban gudaheed, waxaana dhici kara sannadaha soo socda. Dhulgariirku kaligiis ma keeno qarxinta, laakiin waa tilmaamayaasha geedi socodka.
Calaamaduhu waxay bilaabmeen Febraayo 2015, xilligaas oo sidoo kale ay joogsatay qaraxyadeedii ugu dambeeyay. Ilaa hada, qaraxan ugu dambeeyay ee 2014 waxaa sidoo kale ka horeeyay dhul gariir, oo bilowday 2007. Waxa kale oo hubaal ah in fowdada hawada ee ay sababi laheyd ay lahaan laheyd qarash aad u badan. Si aad u fahanto, fiiri fulkaanaha Icelandic Eyjafjallajökull, oo sanadkii 2010 hawada ku tuuray kumanaan tan oo dambas macdan ah, 10 milyan oo rakaab ahna ma aysan raacin duulimaadka. Wadar ahaan taariikhahaas, waxaa lagu qiyaasay in dhaqaalaha Yurub kharashka ku baxay uu ahaa 4.900 bilyan oo doolar.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Fulkaanaha ugu weyn ee Iceland oo qarxaya